रगत जाँच नै हुँदैन ,जाजरकोट अस्पतालमा ? – Nepalpostkhabar
नेपालपाष्ट खबर । १ आश्विन २०७८, शुक्रबार २१:२५ मा प्रकाशित
जाजरकोट -लामो समय देखि जाजरकोटको ५० शश्यको अस्पतालमा रगत जाँच कार्य बन्द भएको छ । सीबीसी मेसिनमा खराव आउदा करिव तीन हप्ता देखि सामान्य खालको जाँच समेत हुने सकेको छैन । सीबीसी मेसिनबाट रगत जाँच देखि अन्य बिभिन्न खालका जाँच समेत हुने गर्दछ ।
चिकित्सकले बिरामी जाँच गरी बिलिङ सिस्टममा पठाउने र बिलिङबाट पैसा तीरेर विरामीहरु दैनिक प्रयोगशालामा गएपनि प्रयोगशालामा सिबिसी मेसिनमा खरावी आउदा जाँच नभएपछि रित्तो हात फर्कनु परेको छ । व्यवस्थापन सँग सो मेमिन मर्मत गर्न पटक ,पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्रोतले बताएको छ ।
के हो कम्प्लीट ब्लड काउन्ट ( सीबीसी)
रगतको गु्रप पत्ता लगाउन देखि अन्य रगतबाट हुने सबै खालका जाँच गर्ने चिकित्सा प्रयोगशाला परीक्षणहरूको एक सेट हो । जसले व्यक्तिको रगतमा कोषहरू , सीबीसीले सेतो रक्त कोशिका, रातो रक्त कोशिका र प्लेट्लेट्स, हेमोग्लोबिनको एकाग्रता, र हेमेटोक्रिटको समेत अबस्था पत्ता लगाउने काम हुन्छ । त्यस्तै एनीमिया, संक्रमण, डेंगू, मलेरिया आदिको समेत जाँच यही सीबीसीबाट गरिदै आएको छ ।
११ प्रकार भन्दा बढी समस्याहरु यो बाट जाँच गरिँदै आएको छ । तर स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा मेसिनमा खरावी आएपनि मर्मत तर्फ व्यवस्थापन पक्षले ध्यान नदिँदा समस्या हुँदै आएको हो ।
५० शश्याको जिल्ला अस्पतालमा एउटा ल्याप मेसिन बनाउन पनि यती सम्मा लापरबाही हुन्छ भने अन्य काम कसरी चल्छ होला आम नागरिकको प्रश्न हो यो ? सेवा नपाए , चौरजहारी ,नेपालगन्ज र सुर्खेत जानुपर्ने रहर नभइ बाध्यता हुँदै आएको छ । दैनिक रगत जाँचका लागि आउने नागरिकले सेवा नपाउदा ल्यापका कर्मचारीलाइ गाली गदै फर्कदा पीडा हुने गरेको ल्यापका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
केही दिन अघि सम्मा अवरुद्ध ग्यास्टिकको जाच सेवा भर्खरै मात्र सुचारु भएको छ । पत्रकारले समाचार लेखे भनेर धारे हात लगाउने व्यवस्थापले आफ्नो कार्यालय भित्र नागरिकले पाएको दुखको विषयमा लिखित उजुरी दिदा सम्मा निरिह भएर बस्दा आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय प्रति हेर्ने दृष्टिकोण समेत बदलिएको छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गरी निबेदन दिदा सम्मा त्यसको उत्तर नदिने कार्यालय समेत स्वास्थ्य नै रहेको भेरी खवर मिडियाका अध्यक्ष नन्दा शाहीले जानकारी दिनुभयो । आफूले रगत जाँचका लागि तीन पटक गएपनि काम नहुँदा नेपालगन्ज जानु परेको तितो यर्थाथ उहाँले सुनाउनुभयो ।